‘प्वाक्क मुखाँ’ हान्नु जस्तो, हास्य कलाकार शिवहरि पौड्यालको स्वा’स्थ्य ना’जुक आइसियुमा भर्ना ! – Dainiki Online
May 15, 2021 May 15, 2021 adminLeaveaComment on ‘प्वाक्क मुखाँ’ हान्नु जस्तो, हास्य कलाकार शिवहरि पौड्यालको स्वा’स्थ्य ना’जुक आइसियुमा भर्ना !
काठमाडौं । अभिनेता एवं निर्देशक शिव’हरि पौड्याललाई पनि भाइ’रस पुष्टि भएको छ । घरमै आइ’सोलेस’नमा रहेका पौडे’लको स्वा’स्थ्यमा सम’स्या सुरु भएप’छि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उन”लाई श्वास’प्रश्वासमा स’मस्या भए’पछि उन’लाई अस्प’ताल लगे’र आइ’सियु’मा भ’र्ना गरि’एको हो , रा’जधा’नीको नैका’पस्थित एपी”’एफ अस्पता’लको आइ’सियुमा उ’नको उप’चार भैरहे’को परि’वारका सद’स्यले जना’एका छन् ।
अ’हिले उन”’लाई आइसीयूमा रा’खेर अक्सिज’नको सहयोग’मा उ’पचार गरिएको छ । महा’मारी फैलि’एपछि नेपा’लका थुप्रै कलाकार संक्र’मित भएका छन् । केही दिन अघि मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई भाइर’स पुष्टि भएको थियो । ८ दिन अस्पताल बसेर घर फर्केका श्रेष्ठलाई घर पुग्नासाथ फेरी स्वा’स्थयमा स”मस्या देखिएपछि दोस्रो पटक अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
उनलाई अझै घर ल्याइएको जानकारी आएको छैन । सम्भव’त उनी अझै अस्पता’लमै छन् । त्यस्तै कला’कार नरेन्द्र महर्जन, रविन्द्र खड्का, सरिता लामिछाने, ऋषि लामिछाने, वर्षा राउत, शिल्पा मास्के पनि आइसो’लेसनमा छन् । उनीह”’रुलाई पनि भाइ’रस पुष्टि भएको हो । कला’कार केकी अधिका’री र प्रकाश सपु’तको रिपोर्ट भने नेगे’टिभ आएको बताइएको छ ।
‘प्वाक्क मुखाँ’ हान्नु जस्तो !’
यो चर्चित थेगो सुन्नेवित्तिकै जो कसैले हास्य कलाकार शिवहरि पौड्याललाई सम्झिन्छन् । २ दशकअघिका टेलिभिजनका दर्शकले उनलाई अझ मज्जाले सम्झिन्छन्, जसले त्यसबेलाको चर्चित टेलिसिरियल ‘देवी’ हेरेका छन् । ‘देवी’मा नायिका देवीका अभिन्न मित्रका रूपमा चित्रित पात्र ‘पूर्णे’ शिवहरि नै हुन्, जसले गर्दा अहिले पनि उनलाई देख्ने, भेट्ने कतिपयले त्यही पात्र ‘पूर्णे’ भनेर चिन्छन् । शिवहरि स्थापित कलाकार हुन् । हास्य विधामा उनको नाम उत्कृष्ट १० भित्रै पर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । हास्य कलाकारका शिवहरि पौड्यालको स्वा’स्थ्य ना’जुक आइसियुमा राखेर उप’चार सुरु गरिएको छ ।